Umatshini weLathe weCNC ophakathi
Umatshini weLathe weCNC onzima
Umatshini weLathe waseSwitzerland weCNC
Umatshini we-Alloy Wheel CNC Lathe Machine
Iziko loomatshini abathe nkqo
I-Lathe kunye ne-Milling Combo
Slant Bed Lathe kunye Milling Combo
UMshini wokuLathe ngesandla
Ukusetyenziswa kwexabiso lasefektri vmc850 3 axis 4 axis nkqo cnc milling iziko machining
ngu admin ngo 2021-12-02
1. Ukwenziwa kokungunda. Uhlengahlengiso olungexesha lweziqwenga zovavanyo lunokuphucula kakhulu izinga lokunyamezela iimpazamo kunye nokunciphisa izinga lempazamo. 2.Iindawo ezinemilo yebhokisi: iinxalenye ezinemilo entsonkothileyo, umngxuma ngaphakathi, umthamo omkhulu kunye nenkqubo yomngxuma omnye, kunye neenxalenye ezinomlinganiselo othile wobude, ububanzi kunye nobude ...
Umatshini wokungqusha we-Vmc1060 CNC uhanjiswe ngempumelelo
ngu admin ngo 2021-11-26
Umatshini we-vmc1060 ugqityiwe kwaye ulayishwe kwisitya seenyawo ze-40 Ukucwangciswa kwale vmc1060: inkqubo yokulawula i-GSK, i-axis ye-5, indlela yesikhokelo somgca, izixhobo ze-16 zohlobo lwe-ATC. Emva kokuba abasebenzi bemveliso yobuchwephesha bahlanganisene ngononophelo ukulungisa iimpazamo kunye novavanyo lomgangatho, f...
TCK550 cnc lathe
ngu admin ngo 2021-11-19
Specification TCK550 Working Range Max swing phezu kwebhedi dia. mm Φ550 Ubuninzi bokujinga phezu kwedaya enqamlezileyo. mm Φ300 Ubukhulu obujika ubukhulu bedayamitha / ubude mm Φ550/900 ubukhulu bokuguqula idiamitha mm Φ550 Hydraulic chuck diameter mm Φ250 Spindle impumlo / A2-8（GB/T590...
Vmc850 cnc milling mahcine
ngu admin ngo 2021-11-12
Uphawu lwethu lwe-vmc850 cnc milling mahcine: 1.Casting: I-HT300 i-resin ye-resin enganyangekiyo kwisanti yokulahla i-resin ekwazi ukumelana nokuguga inoxinano oluphezulu kunye nokumelana nokunxiba kakuhle! Isali ithatha isakhiwo sokuphosa esiphindwe kabini, kunye nesakhiwo esikhulu sekholomu esine-A sibonisa ukukwazi ukusika ukuqina. 2....
Intsimbi ye-C46p CNC
ngu admin ngo 2021-11-08
I-1.Ibhedi edibeneyo yokuphosa iqinisekisa ukuqina okuphezulu kunye nokuzinza okuphezulu komatshini wonke. 2.I-X kunye ne-Z-direction guides zikumgangatho ophezulu we-rolling linear guides ezivela eTaiwan okanye ezithunyelwa ngaphandle, kunye nokuthanjiswa okuzenzekelayo okunyanzeliswayo, ukuqonda intshukumo yesantya esiphezulu somatshini ...
Indlela yokwahlula umahluko phakathi kwe-servo hydraulic turret kunye ne-turret yamandla?
ngu admin ngo 2021-10-29
Ngokubanzi, i-turret yamandla inokufakwa kunye nezixhobo zombini zokujika kunye nabasiki bemilling. Ke ngoko, inokujika kunye nokusila. Yikhompawundi yokwenyani yokujika kunye nokusila. I-turret yoxinzelelo ebusuku inokufakwa kuphela ngezixhobo zokuguqula. Akukho msebenzi wamandla...
CK61125 umsebenzi onzima CNC lathe
Iimpawu eziphambili zesakhiwo sesixhobo somatshini: 1. Esi sixhobo somatshini sisixhobo somatshini we-CNC okhawulezayo, ochanekileyo, othembekileyo. Amacandelo aphambili afana nesiseko sebhedi, umzimba webhedi, kunye nebhokisi yentloko yonke iphoswe kwizinto eziphezulu zokuqinisekisa ukuba ixesha elide ...
ngu admin ngo 2021-10-21
Ixesha lokuthumela ngenqanawe
ngu admin ngo 2021-10-14
Namhlanje, ngenxa yomsebenzi onzima wabo bonke abasebenzi baseShandong Lu abancinci be-Machinery Equipment Co., Ltd., i-container ye-20-foot yathunyelwa e-Ukraine; yonke le khabhinethi iqulethe i-1 yomgangatho ophezulu we-ck6150*...
Ukubaluleka kwe-CNC Lathe eNqunyiweyo eneBhedi eQiniweyo
ngu admin ngo 2021-09-30
1. Uzinzo oluhle kunye neendawo ezinkulu ezifuna ukucutshungulwa ngokuqhelekileyo zibhedlele ibhedi okanye i-flat bed inclined guide machine tools, kuba iindawo ezihambelanayo zezixhobo zoomatshini eziphakathi kunye ezinkulu nazo zinkulu, ngakumbi i-turret inxalenye. Ukusetyenziswa komzila wesikhokelo esithambekeleyo ikakhulu ukoyisa igrav...
I-CK6180 Ibhedi enzima ye-CNC lathe kunye nomatshini wokugaya i-combo ene-12 yesikhululo sokuhlala i-turret
ngu admin ngo 2021-09-16
Iinkcukacha: CK6180 Series Max. ukujinga phezu kwebhedi (mm) φ800 Ubukhulu. swing dia. phezu kwesilayidi esinqamlezileyo(mm) φ500 Ububanzi bendlela yesikhokelo(mm) 600 Max.ubude bokuqhuba(mm) 1500/2000/3000 Ifomu akukho zixhobo Uluhlu lwesantya sokusonta (r/min) 25-850 rpm Itheminali yokusonta s...
Iziko lomatshini elithe nkqo le-VMC1580
ngu admin ku 2021-09-09
Esi sixhobo somatshini liziko lomatshini elithe nkqo elilungele ukwenziwa komatshini kunye nokungunda. Inokuhlangabezana neemfuno zokusetyenzwa ukusuka kubuchwephesha oburhabaxa ukuya ekugqityweni, kwaye inokugqiba iinkqubo ezahlukeneyo ezinje ngokugaya, ukugrumba, ukucofa, kunye nokukruqula. Uyilo olungundoqo f...
Ubumbeko olulungiselelweyo, inkangeleko iyafumaneka